चेल्सी साउथह्याम्टनसंग बराबरीमा रोकिएको छ । » Mero Khel फुटबल
६,कार्तिक,२०७७ ( Thursday, October 22, 2020 ) 5: 45 pm
चेल्सीविरुद्ध साउथह्याम्टनको रोचक बराबरी
MeroKhelPosted on १,कार्तिक,२०७७ October 18, 2020 ५ दिन पहिले
एजेन्सी । प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी साउथह्याम्टनसंग बराबरीमा रोकिएको छ । शनिबार राति भएको खेलमा चेल्सी साउथह्याम्टनसंग ३–३ गोलको बराबरीमा रोकिएको हो ।
घरेलु मैदान स्टाम्फर्ड ब्रिजमा टिमो वेर्नर चम्किएको खेलमा चेल्सीले तीन पटक अग्रता लिएर पनि जोगाउन सकेन । वेर्नरले १५ औं मिनेटमा प्रिमियर लिगमा डेब्यू गोल गर्दा चेल्सीले खेलमा अग्रता बनाएको थियो । चिलवेलले निकालेको लामो पासमा ब्यक्तिगत स्किल प्रदर्शन गर्दै वेर्नरले डिबक्स भित्रबाट हानेको प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो । यस्तै २८ औं मिनेटमा वर्नेरले ब्यत्तिगत तथा टिमका लागि दोस्रो गोल गरेका थिए ।
पहिलो हाफमाको अन्तिममा चेल्सीले १ गोल ब्यहोर्यो । ४३ औं मिनेटमा काइ हावट्र्जले मिस पास खेल्दा ड्यानी इङ्सले गोेल गर्दै खेल २–१ को स्थितीमा ल्याए । ५७ औं मिनेटमा चे एडम्सले डिफेन्डर जुमा र चेल्सीका गोल रक्षकको तालमेल नमिल्दा खेल बराबरीमा ल्याए ।
५९ औं मिनेटमा वेर्नरले निकालेको पासलाई हावट्र्जले शुन्दर गोल गर्दै चेल्सीलाई ३–२ को अग्रता दिलाए, तर इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा वालकोटको पासमा जान्निक भेस्टर्गाडले गोल गर्दै चेल्सीलाई ३–३ गोलको बराबरीमा रोके । चेल्सीले खेलमा हाकिम जियाचलाई समेत डेब्यू गराएको थियो ।
बराबरीपछि छैटौं स्थानको चेल्सीको तालिकामा ८ अंक भएको छ । चेल्सीले ५ खेलमा २ जित र २ बराबरी खेलेको छ भने एक खेलमा हार सामना गरेको छ । ५ खेलमा २ जित, १ बराबरी र २ हारको समाना गरेको साउथह्याम्टनको भने ७ अंक भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः स्टर्लीङको गोलमा सिटी विजयी
Tagschealse premier league चेल्सी चेल्सी साउथह्याम्टन टिमो वेर्नर शनिबार
Previous Postनेपोलीसंग एटलान्टा पराजितPrevious Post
Next Postधवनको शतक, दिल्लीको सातौं जितNext Post
फिफा वरियता सार्वजनिक,नेपाल यथावत
MeroKhelPosted on ६,कार्तिक,२०७७ October 22, 2020 २ घण्टा पहिले
घरेलु मैदानमा हार्दै च्याम्पियन्स् लीगमा रियाल मड्रिडको खराब शुरुवात
MeroKhelPosted on ६,कार्तिक,२०७७ October 22, 2020 ११ घण्टा पहिले
च्याम्पियन्स् लीगमा लिभरपुलको कठिन जित
MeroKhelPosted on ६,कार्तिक,२०७७ October 22, 2020 १२ घण्टा पहिले
दसैंमा खेलाडीले के–केमा ध्यान दिने ?
निराशामा बितेको क्यानको एक बर्ष
महिला क्रिकेटरको पहिलो वर्गिकरणमै चुकेको क्यान
मनलाग्दी गरिएको वर्गिकरण !
फुटबल सुचारु गर्न ‘शुभ संकेत’
आईपीएलः आज राजस्थान र हैदराबाद खेल्ने
नेपाली ब्याडमिन्टन क्लबले डेनमार्कमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै,नयाँ कार्यसमिती चयन
Home>फुटबल>चेल्सीविरुद्ध साउथह्याम्टनको रोचक बराबरी